WARARKII MILATARIGA MAAYLAND IYO FEDERAALKA SOOMAALIYA | SMC
Home WARARKA MAANTA WARARKII MILATARIGA MAAYLAND IYO FEDERAALKA SOOMAALIYA
WARARKII MILATARIGA MAAYLAND IYO FEDERAALKA SOOMAALIYA
Taliyaha ciidanka lugta federaalka Soomaaliya waxaa loo magacaabay nin gashaanle dhexe ahaa haddana si degdeg ah janan loo bootiyay beeshiisuna tahay beesha guud ee Galmudug, halka taliyaha taliye-kugeenka ciidanka xooggana loo magacaabay nin isna gaashaanle ahaa halmar loo bootiyay janaraal kuna beel ah beesha guud madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo.
Wasaaradda gaashaandhigga waxaa imikadan (reesto) ku ah taliyaha guutada 7-aad qaybta 60-maad Xasan Jaamici u dhashay Galmudug, kadib kolkii isaga iyo Janaraal Laba-Afle oo isna Galmudug ka soo jeeda ahna Taliyaha guutada 6-aad qaybta 60-maad iyo atbaacdooda qabiil ahaan ay isugu dayeen inay dowlladda federaalka Soomaaliya afgambiyaan bishii september gudaheeda shir qarsoodi ah ay ku yeesheen magaalada Muqdisho la ogaaday, oo Jaamici kolkay maxkamadda ciidanka qalabka sida ay u yeertay uu maxkamadda la soo galay ciidamo badan iyo BKM-yo, taaso dhalisay in kabtankii illinka maxkamadda joogay goortuu ku yiri ciidanka dib u celi, uu Xasan Jaamiciga awoodda isbida dhirbaaxo ku jiiday kabtankii albaabka joogay waajibkiisi qaran gudanayay, deetana hubkiisi ciidankiisu dabajooga xafiisyadu u gudbay, iyado xafiisyada iriddoodu markuu soo gaaray uu ka soo hor baxay sarkaal saro janan ah kuna yiri Jaamici “digtoonow.”
1.Taliyaha ciidamada xoogga waa janaraal Odawaa Yuusuf Raage ku beel ah Xasan Safarow.
2.Taliyaha hoggaanka maamulka lacagta waa oo janaraal Ibraahin. Fiiro gaar ah: sarkaalkan isago isbatoore ah ayuu koorso Turkiga kaga soo baxay waxaana degdeg loogu dallacsiiyay kabtan haatana gaashaanle ayaa laga dhigay wuxuuna ku beel yahay Xasan Safarow.
3. Taliye-Kugeenka hoggaanka maamulka lacagta waa Kabtan C/Fitaax ku beel ah Fahad Yaasiin.
4.Taliyaha hoggaanka hubka iyo rasaasta waa janaraal Xasan ku beel ah Fahad Yaasiin. 5.Taliyaha hoggaanka gaadiidka waa janaraal Raage ku beel ah raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre.
6.Taliyaha hoggaanka xafiiska ciidanka waa gaashaanle Cimraan beeshiisu Maayland ma aha.
7.Taliyaha hoggaanka Saadka waa gaashaanle Sharmaarke ku beel ah wasiir Goodax Barre. 8. Taliyaha hoggaanka siyaasadda waa gaashaanle sare Qorane ku beel madaxwayne Maxamed C/LLaahi Farmaajo. 9.Taliyaha hoggaanka hawlgalka waa gaashaanle dhexe Iimaan Elman ku beel ah Galmudug.
10.Taliyaha hoggaanka sirdoonka waa gaashaanle dhexe muuse ku beel ah raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre.
11.Hoggaanka dhismaha iyo hoggaanka sancada, labadan hoggaan waxaa isku haya nin lagu magacaabo janaraal Mahdi ku beel ah Fahad Yaasiin, halka kuxigernkiisu dhanka hoggaanka dhismaha yahay sarkaal Maayland u dhashay lagu magacaabo kornayl Jiidow musuqmaasuq been ah intuu ku eedayay xabsigu liintu ku cabbayo, iyado xitaa sharcigu uu dhigay sarkaal inaan xabsi la dhigi karin, la reestayn karayo uun.
Haddaba dadow qalin buug intaad qaadataan tirada adinkoon qaldaynin safaaraduhu ha
dambeeyaane iyo xilalka kalo qarsoon kuwa hoose ku lifaaqaya saamigu ma saxan yahay?
10.Taliyaha hoggaanka sirdoonka waa gaashaanle dhexe muuse ku beel ah raysal-wasaare Xasan Cali Kheyre. 11.Hoggaanka dhismaha iyo hoggaanka sancada, labadan hoggaan waxaa isku haya nin lagu magacaabo janaraal Mahdi ku beel ah Fahad Yaasiin, halka kuxigernkiisu dhanka hoggaanka dhismaha yahay sarkaal Maayland u dhashay lagu magacaabo kornayl Jiidow musuqmaasuq been ah intuu ku eedayay xabsigu liintu ku cabbayo, iyado xitaa sharcigu uu dhigay sarkaal inaan xabsi la dhigi karin, la reestayn karayo uun.
Adaa baran waayay adaa baran waayay buuggii lagu siiyayna
Previous articleSAWIRO:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la kulmay Wakiilka QM
Next articleAkhriso Xog Ciidan Caburin loogu Talagalay Noogu Tababareysa Erateriya.